VAKY BANTSILANA : Mandefitra manana ny rariny… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Mandefitra manana ny rariny…
Fiarahamonina manao ahoana no mbola tia hajoro eto amin’ity firenena ity ? Raha ny hita sy tsapa ankehitriny, mahazo laka sy mahazo vahana ireo mpanao ratsy. Loza iray, loza roa, ary ny tena zava-doza, misy hatrany ireo manao lomano tsy mikobana ka mahavita miaro ireo mpanao ratsy. Volo ngita mifandray tendro, hoy ny Ntaolo, ka homba ratsy. Marobe ireo mpisehatra samihafa no mijoro maneho fa tsy mety intsony ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny fanaovana ampihimamba ny volam-bahoaka. Aiza ny solombavambahoaka hamaky bantsilana ny momba izany sa ho solombava mihinana fotsiny?
Mandefitra manana ny rariny vahoaka. Ny vahoaka izay heverina fa mandrimandry manana aretina amin’izao toe-draharaha mafanafana ratsy izao. Efa tsy mandady intsony ny trambo fa efa mihatra aman-taolana mihitsy ny fanaparam-pahefana ataon’ireo mihevitra ny tenany ho tsimatimanota. Araka izany, ny tsihy leiretsy, no fola-mandefitra fa ny olombelona tsy fola-mandefitra na oviana na oviana. Mila mijoro, midrikina ary manohitra mihitsy manoloana ny fanaovana tantely afa-drakotra ny volam-bahoaka. Tsy tokony handefitra eo anatrehan’ireo mpandroba sy ireo mpiray kopaka isasahana fanetriben’ny firenena isika valalatsimandadiharona. Ho very hasina ny rariny, indrindra ny volam-bahoaka no voahodinkodina.
Raha tsy ampiharina amin’ireo mpangalatra ny tany tan-dalàna fa malaza tsy ihinanana toa vilian-tsahona fotsiny. Azo antoka ny fahavoazan’ity tanindrazana malalantsika ity… Ny antony, an’ny vola ny marina eto an-tany. Raha tsy voagadra ireo, tsy tako-nafenina, fa ny olo-marina no hanagadra tena. Raha tsy enjehina sy anarina ary faizina ireo mpandroba ny volam-bahoaka, hampirisika ny hafa hanao ratsy koa. Tsy azo andeferana na oviana na oviana ny ratsy toa izany. Manjary mizotra any amin’ny lalan’ny fahalovana ny firenena sy ity tanindrazana iombonana ity.
Tomponandraikitra ny olom-pirenena tsirairay avy ny amin’ny fampijoroana marina ny tena rariny satria ny hitsiny tsy aritra, ny rariny tsy enti-mandefitra. Miandry ireo tomponandraiki-mahefa eto amin’ny tany sy ny firenena handray ny andraikiny, mba ho ohatra velona eto amin’ny firenena ny fampijoroana ny fahamarinana araka ny lalàna. Mba tsy hisy intsony ireo mihevitra ny tenany ho tsimatimanota eto amin’ny firenena. Ekena fa ny mandefitra akory tsy folaka, saingy misy fetrany ny fandeferana. Noho izany, tsy tokony handefitra manana ny rariny ny vahoaka. Sao ny rariny itompoana tonga raiben-keloka… Mbola mandre sa mandre ilany ihany izao fitondram-panjakana izao ô!!!